Inqwelo moya entsha yaseIndiya enexabiso eliphantsi inokuba yintsikelelo yeBoing
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inqwelo moya entsha yaseIndiya enexabiso eliphantsi inokuba yintsikelelo yeBoing
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umsebenzi omtsha unokuba sesinye sezona zivumelwano zibalaseleyo zonyaka ngaphandle kwe-United States zokuthenga okanye zokuqeshisa iinqwelo-moya zeBoeing 737.
IBoeing ibona ithuba lokuphucula isikhundla sayo eIndiya.
Uzigidigidi waseIndiya ubhengeza umphathi ophethe ixabiso eliphantsi ngexabiso eliphantsi.
Iphulo elitsha sele liqhubela phambili,
Umenzi wenqwelomoya wase-US iBoeing Ungafumana ithuba lokuphinda ufumane indawo elahlekileyo e-India kunye no-Rakesh Jhunjhunwala obhengeza izicwangciso zokuphehlelela inqwelo moya entsha yaseIndiya enexabiso eliphantsi.
Ukuma kwemakethi yase-Boeing eIndiya kwenzakala kukuwa komnye wabathengi bayo abakhulu, iJet Airways, kwiminyaka emibini edlulileyo.
UJhunjhunwala, owaziwa njengo “Warren Buffett wase India” ngotyalo-mali lwempahla oluyimpumelelo, uceba ukudibana nabo babesakuba zii-CEO ze-IndiGo, eyona mphathi mkhulu kweli lizwe, kunye neJet Airways ukufuna iimfuno zohambo lomoya lwasekhaya.
Ngelixa i-Akasa Air ecetywayo ngu-Jhunjhunwala iza ngexesha apho ishishini lokuhamba ngenqwelomoya e-India lixhalabile ngenxa yesifo se-COVID, esibonise ukuba iinqwelomoya zilahlekelwa ziibhiliyoni zeedola, ithemba lecandelo lexesha elide liyenza ibe yintengiso eshushu kubenzi beenqwelo moya iBoeing kunye neAirbus.
Omnye umthombo oshishino uthe eli shishini litsha sele lisiya kwinto enokuba yeyenye yezona zinto zibalulekileyo zonyaka ngaphandle kwe-United States ukuthenga okanye ukuqeshisa i-737s.
KwiBoeing, eli lithuba elihle lokuba bangenelele kwaye baphakamise umdlalo wabo, becinga ukuba abanaye omnye umqhubi ophambili wenqwelomoya yabo engama-737 eIndiya ngaphandle kweSpiceJet.
U-Boeing akazange aphawule ngezicwangciso zika-Akasa kodwa wathi uhlala efuna amathuba kunye neengxoxo kubathengi bangoku kunye nabanokuba ngabathengi malunga nokuba angaxhasa njani ngokufanelekileyo iimfuno zabo bezithuthi kunye nokusebenza.
UJhunjhunwala, ocinga ukutyala i-35 yezigidi zeedola kwaye uza kuba neepesenti ezingama-40 zomntu ophetheyo, ulindele ukufumana isatifikethi sokungavumi ukwala kwinkonzo yezobuchwephesha yase-India kwiintsuku ezili-15 ezizayo, utshilo. Iqela lenqwelomoya elinexabiso eliphantsi lijonge ekwakheni izithuthi zeenqwelomoya ezingama-70 180 kwisithuba seminyaka emine, utshilo.
Abanye abaphathi baka-Akasa ngu-Aditya Ghosh, ochithe ishumi leminyaka e-IndiGo kwaye wabongwa ngokuphumelela kwangoko, kunye no-Vinay Dube, owayesakuba yi-CEO yeJet owayesebenze ne-Delta.
Isibhakabhaka saseIndiya silawulwa zizithwali zexabiso eliphantsi (ii-LCCs) kubandakanya i-IndiGo, iSpiceJet, iGoFirst kunye neAirAsia India, uninzi lwazo lusebenzisa iinqwelomoya zeenqwelo moya ezinqamlezileyo.
I-Boeing ilawula intengiso yomzimba ebanzi ye-India yeenqwelomoya ezingama-51 kodwa iimfazwe zokuhamba kunye neendleko eziphezulu zikhokelele ekwenzakaleni phakathi kwabathwali beenkonzo ezizeleyo, kubandakanya iKingfisher Airlines e2012 kunye neJet Airways kwi2019, ezenza ii-LCCs kunye neeAirbus zibalasele nangakumbi.
Isabelo sika-Boeing se-India sika-570 seenqwelomoya ezinqwenelekayo zomzimba zehla zaya kwiipesenti ezili-18 emva kokubhubha kukaJet ukusuka kwiipesenti ezingama-35 ngowama-2018, idatha evela kubacebisi beCAPA eIndiya ibonisa. UJet usandula ukuhlangulwa njengongenamali kwaye kulindeleke ukuba abhabhe kwakhona.
Abaphethe amaIndiya baneenqwelo moya ezingaphezulu kwe-900, ezi-185 kuzo ziinqwelomoya ze-Boeing 737 kunye ne-710 ziyi-Airbus, ebala i-IndiGo njengomnye wabathengi bayo abakhulu kwihlabathi liphela.